musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Angelo Correa Nyaya dzeChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Kutanga kuenda, anonzi "Mutumwa mudiki". Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheAngel Correa Nyaya yeUdiki, Biography, Chokwadi cheMhuri, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakange achiri mwana kusvika pakuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kweNgirozi Correa. Mufananidzo Credits: Pasionfutbol uye Chinangwa.
Ehe, munhu wese anoziva nezve rake rinorwisa chinzvimbo- hunyanzvi uhu, kumhanya uye yepasi nzvimbo yekukoka. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeAngel Correa's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Angel Correa Nyaya Yebhudhi Nyaya- Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri
Kutanga kubva, Ángel Martín Correa Martínez akazvarwa pazuva re9 Kurume 1995 paguta reRosario muArgentina nyeredzi dzinoda Lionel Messi, Mauro Icardi uye Angel Di Maria chimvuramabwe kubva. Correa ndomumwe wevana vazhinji akazvarwa kuna amai vake vanozivikanwa uye kuna baba vake avo vanozivikanwa zvishoma nezvake. Pazasi pane mufananidzo usingawanzoitika weumwe wevabereki vaAngel Correa- mai vake.
Sangana nemumwe wevabereki vaAngel Correa. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kunyange zvakadaro, zviri pachena kuti iye ndudzi yeArgentina yedzinza rakasanganiswa neakangozivikanwa mashoma emhuri. Wakanga uchiziva here kuti mudiki Correa akarererwa kuLas Flores nharaunda yeRosario kwaakakurira pamwe nevanin'ina hama dzisinganyanyo kuzivikanwa nezvake?
Akarererwa kuLas Flores nharaunda yeRosario. Mufananidzo Credits: WordAtlas uye PassionFutbol.
Kukurira mumhuri yepasi-yakasununguka kumhuri yeLos Flores, Correa akararama hupenyu hwepakutanga hwehurombo hwekuvakidzana munharaunda maive nemikana yakakura yekuti aigona kupedzisira ave akapindwa muropa nezvinodhaka.
Angel Correa Nyaya Yebhudhi Nyaya- Dzidzo Yake uye Basa Rokuvaka
Nekudaro, Correa yakakwanisa kuwana kupukunyuka kubva kuhunhu hwakaipisisa hwainge hwakamupoteredza nekunyudzwa munhabvu yemumugwagwa uye kuita zviitiko zvekuvaka-basa nemakirabhu ake epamba evakomana - Alianza mutambo naTiro.
Tiro anga arimwe remakirabhu emuno aakadzidzisa nawo uye airidza achiri mukomana. Mufananidzo Credits: PassionFutbol uye Twitter.
Panguva iyo Correa akange ave nemakore gumi nemaviri, akarohwa nehana inotyisa paakarasikirwa nababa vake vanomutsigira vachiteverwa nehama mbiri. Kunyangwe kurwadziwa kwacho kwakanyanyisa kuti Correa ibereke, akaita izvo aiziva kuita zvakanyanya; kuwana nyaradzo nenzira yenhabvu.
"Chero ini pandinopinda muchikamu chemitambo, ndinokanganwa zvese zvakashata zvakaitika kwandiri uye ndinongofarira kutamba,"
Angel Correa Nyaya Yebhudhi Nyaya- Hupenyu Hwake hwepakutanga Hupenyu
Neraki, Correa yakanga isiri yakanaka chete kuwana kwekutiza nhabvu asi aive nehunyanzvi hwekuita bhora, budiriro iyo yakamuwanisa kunyoresa muhurongwa hwevechidiki veSan Lorenzo muna 2007 mushure mekunge awanikwa nemumwe wevatambi vetsiva.
Akaunzwa kuSan Lorenzo mushure mekunge mumwe wevatambi vekirabhu amuwana. Mufananidzo Chikwereti: PassionFutbol.
Yakanga iri nedivi reArgentina uko Correa akapedza makore 4 achikudza hunyanzvi hwake nekudzidziswa basa raizomutora kupfuura kondinendi yeSouth America. Kusimukira kwake kuburikidza nenzvimbo dzechikwata ichi zvaive zvemeteoric zvichikwira muna 2013 paakaita basa rake reunyanzvi kukirabhu raive zita reCiclón.
Angel Correa Biography- Nzira Yake inoenda Mukurumbira Nyaya
Kwapera gore, Correa akabvuma kubvumirana kuita neLaiga yeLiga iyo panguva iyoyo akabata Atlético Madrid. Zvinosuruvarisa zvakaonekwa kuti aive aine bundu pamoyo paari kuita zvekurapa kuti apedzise kutama kwake kuenda kuSpain side.
Kuvhiyiwa kwake kwemwoyo kwakamunzvenga kubva kune zviitiko zvaakange akatarisira kwenguva refu kutora chikamu. Image Credits: Twitter uye PassionFutbol.
Ehe, bundu rakabviswa zvinobudirira kuburikidza nekuvhiya, rakauya nemubhadharo iro rakaona Correa ichirasikirwa nehafu uye yekupedzisira yeCopa Libertadores neSan Lorenzo. Iyoyo yaive mitambo yaaigarotarisira kutamba nekuti akaita zvakawanda kubatsira timu yake kusvika pamatanho ekupedzisira.
Angel Correa Biography- Kukwira kwake kuMukurumbira Nyaya
Correa payakazoita kupora zvizere, akabatana zviri pamutemo neAtlttico Madrid musi wa13 Zvita 2014 uye akashanda nzira kuti ave mumwe wevatambi vepanonyanya kuvimbika mumakore mashoma.
Ona kuti ndiani akashanda nzira yake kumusoro kuti ave kiyi pamberi muAtltico Madrid. Chifananidzo Chemifananidzo: Marca.
Haawanikwe zvakare achishomeka pabasa rake rekunze nechero timu yenyika yeArgentina uko anowanzo kufananidzwa newaanogara naye Sergio Agüero kunyangwe kana maitiro ake ekutamba akafanana Carlos Tevez. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Angel Correa Biography- Musikana, Mukadzi, uye Kid
Kuenderera mberi kune hupenyu hwe rudo hweCorrea, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvemberi kufambidzana nhoroondo nekuti haana kuzarura zvakawanda nezvakaitika mudhipatimendi iro. Saka nekudaro, hazvigone kutaurwa zvine mutsindo kuti kunyangwe iye aive nevanasikana mune imwe nguva yapfuura uye asina mukadzi panguva yekunyora. Nekudaro, maererano WTFoot, kune mumwe akavanzika waakabatana naye anonzi Sabrina Di Marzo uyo akaridzira runyerekupe kuti ndiAngel Correa Musikana webasa uye amai vemwanasikana wake.
Sangana nemukadzi akarumidzirwa kuve musikana waAngel Correa
Sezvambotaurwa, Angel mubereki kune mwanasikana anodakadza Lolita akaberekerwa naye nemusikana wake kana mukadzi. Yake Instagram account inoratidzwa nemifananidzo yaLolita ari kukura nekukurumidza uye achifara. Chiizve? musikana akanaka uyu anoda kushandisa nguva nababa vake anofarawo nekushamwaridzana navo.
Angel Correa anoda mwanasikana wake uye anowanzopedza nguva yakanaka naye. Mifananidzo Credits: Instagram.
Angel Correa Biography- Family Facts
Izvo zvaiti mainini vanobva pamba kunotsvaga mari uye vodzoka kumba kunogovana nemhuri yavo. Zvimwe chete izvi zvinogona kutaurwa nezvaAngel Correa uyo anodyira mhuri yake mhuri. Tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yekwaCorrea kutanga nevabereki vake.
About Ángel Correa baba: Correa yakarasikirwa natete vake vadiki vanozivikanwa nemaoko anotonhora erufu pavakanga vachingova nemakore gumi nemaviri. Kunyangwe kumberi kwacho kusati kwaratidza izvo zvakakonzera kufa kwababa vake, anorega mufi nekumupa kuyeuka kwake kwakanakisa kweudiki nekuenda naye kunodzidziswa.
About Ángel Correa amai: Iwe unoziva here kuti amai vadiki vaCorrea vanozivikanwa ndivo mumwe weamai vane hanya vakawanda vakaratidza kuti kurera vana nezve zvese? Akabatsira kusimudzira kumberi uye nevanun'una vake mushure mekufa kwemurume wake. Naizvozvo, amai vaCorrea havadyi kusvikira vaona kuti vana vavo vaguta. Iye anonyanya kudada neCorrea uyo akafungidzira basa remunhu anowana chikafu kubva pazera ramakore gumi nemaviri nekupa yake Per Diem yekuchengeta mhuri.
Mufananidzo usingawanzoitika waAngela Correa naamai vake. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Ángel Correa Siblings: Wekumashure kune vakomana vazhinji vanosvika gumi. Akarasikirwa vaviri pamwe nababa vake kare kare zvisiri zvakanyanya kuzivikanwa nezvevamwe vese vanonzi vakomana. Izvi zvinokonzerwa nekuti Correa yagara ichingotaura nezvekupa mai vake nevanin'ina asingataure hanzvadzi panguva dzekubvunzurudzwa. Pazasi pane chikamu chepedyo chemhuri yaAngel Correa chatakawana.
Angel Correa naamai vake uye imwe yehama dzake. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Ángel Correa hama: Kure nehupenyu hwemhuri yaAngel Correa, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve madzitateguru ake nemidzi yemhuri, kunyanya nezvehukama naamai nasekuru vake apo babamunini vake, bababamunini, hama dzemukoma, muzukuru wake uye nanabamunini vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora. ichi bio.
Angel Correa Biography- Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi kure neBhola
Kufanana nevanhu vese, Angel Correa's ane hunhu hunhu hunotsanangura kuti iye ndiani chaiye kunze kwechikamu chemutambo. Unhu hunogovaniswa nemunhu anotungamirirwa nePisces Zodiac chiratidzo chinosanganisira yekumberi pfungwa dzakadzama, chimiro chinotungamira nehunhu uye nzvimbo-intuition.
Correa uyo asingatomboburitsa chokwadi nezve zvakavanzika zvake uye zvake ega zvinhu anoisa zviitiko zvishoma zvinopfuudza iye nezvezvaanofarira uye zvekunakidzwa. Zvinosanganisira kutamba mitambo yemavhidhiyo, kufamba uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Kutamba mitambo yemavhidhiyo ndeimwe yematambiro ekumberi. Mwanasikana wake anogovana zvakafanana nemabhaudhi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Angel Correa Biography- Hupenyu Hwake Chokwadi
Taura nezvekuita kwaAngel Correa mari yekuita uye maitiro ekushandisa, anotambira mihoro yakawanda, mibairo, uye kuhwina mabhonasi ekutamba nhabvu yepamusoro apo makumiririra anoita basa rakakosha mukuwedzera kweupfumi kwake,
Nekudaro, iyo yekumberi uyo ane tarisiro yakaenzana inodarika $ 3.50 miriyoni panguva yekunyora iyi bio. Ane izvo zvinotora kurarama hupenyu hwoumbozha sevapi vatambi vepamusoro vemitambo vanosanganisira Cristiano Ronaldo, Neymar Jr uye Paul Pogba.
Correa inofungidzirwa kuti Net inodarika mamirioni matatu inotaura zvakanaka nezve hunhu hwekutamba nhabvu yepamusoro. Mufananidzo Wemifananidzo: Pho.to.fun.
Angel Correa Biography- Chokwadi Chake chisina kujairika
Kugumisa iyo yedu Angel Correa nyaya yehucheche uye biography, heano mashoma anozivikanwa kana asina kutaurwa chokwadi nezve kumberi.
Mari Yemubhadharo: Sezvineiwo munaSeptember 2018, chibvumirano cheArgentina neAtlético Madrid chakamuona achitora muhoro wepi 3.5 Mamirioni maEuro pagore. Anodzvanya mubairo waAngel Correa muhuwandu, anowana zvinotevera.
Ngirozi Correa Mari Yemari Kuputsa. Credits: WTFoot
Pano, isu takawedzera mari yaAngel Correa's Salary (2018 zviverengero) yeChipiri yese.
Uku ndiko kuwana kwemari yakawanikwa naNgirozi kubva pawanga uchiona iyi Peji.
Kana iyo nhamba iri pamusoro isingawedzere, zvinoreva kuti uri kuona kubva kune Peji reAmP. ikozvino Click HERE kuti uone mubairo waAngel Correa pamari pamasekondi. Waizviziva here? Izvo zvinotora mushandi wepakati muEurope angangoita makore masere matanhatu kuti awane zvakafanana ngirozi inowana mumwedzi mumwe chete.
Chitendero: Vabereki vaAngel Correa vakamurera mukutevedzera chitendero chechitendero chechiKristu. Nhabvu nhabvu inodzidzira Katolika sevanhu vazhinji vanozvarwa muRosario muArgentina. Muchokwadi, akasangana naJorge Mario Bergoglio kuArgentina asati ava Papa Francis.
Angel Correa ane ipapo kadhinari Jorge Mario Bergoglio. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Tattoos: Correa sezviri pachena yakakura pamatato uye ine hunyanzvi hwemuviri pamutsipa wake, pachipfuva, maoko nemakumbo. Hapana magumo ekuona kuti mangani mamwe mabasa aanogona kupihwa ekuti kuchine mukana weakawanda.
Unogona kuita zvirevo kubva mumateti ake. Mufananidzo Wekodhi: WTFoot.
FIFA ratings: Nguo dzaAngel Correa dzese FIFA dzakamira dzinopfuura makumi masere nesere panguva yekunyora iyi bio. Kunyangwe zviyero zviri kuvandudzwa kwemakore apfuura, vateveri havagone kumuona achiwana mwero wakakwana we82 nechinangwa chekuchengetedza masevhisi ake emitambo yeFIFA yemitambo.
Fans dziri kutarisira ratings yepamusoro yezvikonzero zviri pachena. Mufananidzo Chikwereti: SoFIFA.
Kusvuta uye Kunwa: Correa haina kupihwa kuputa uye haana kuonekwa achinwa. Kufanana nevakawanda venhau vebhola, ane hanya nehutano hwake uye hapana chaaigona kuita kuti zvitsaure.
Angel Correa Biography- Yake Wiki Yekuziva Base
Muchikamu chino chekupedzisira cheAngel Correa's Biography Chokwadi, iwe unofanirwa kuona yavo Wiki yeruzivo. Inoratidzwa pazasi, inobatsira iwe kuwana ruzivo nezve Mutumwa mudiki nenzira yakapfupi uye yakapusa.
Ngirozi Correa izita Rizere Ángel Martín Correa Martínez
Ngirozi Correa Zuva rekuzvarwa Kurume 9, 1995 (makore makumi maviri nemaviri panguva yekunyora)
Ngirozi yeCarrea Correa Nzvimbo yekuzvarwa Rosario, Argentina
Nezve Vabereki vaAngel Correa Baba vake vanonoka uye mai vake vapenyu (panguva yekunyora).
Angel Correa's Mwanasikana's zita Lolita Correa
Chitendero chaAngel Correa ChiKristu (MuKatorike)
Mutambo weAngel Correa's FIFA 81 ine mukana we87 (sepana Ndira 2020)
Mutambo waAngel Correa Mutumwa mudiki
Angel Correa's Girlfriend's zita (Rumored) Sabrina Di Marzo
Zita remukadzi waAngel Correa (Rumored) Sabrina Di Marzo
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Angel Correa Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Mauro Icardi Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Lionel Messi Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts